Shaqada qarsoon ee kontoroolka fogaanta baabuurka. - Wararka - Shenzhen Jos Technology Co., Ltd.
1. Shaqada caawinta
Inta badan waxaa furaha baabuurka ku yaal qaab gees ah. Dad badan ayaan garanayn waxa shaqadani qabato. Dhab ahaantii, waxay leedahay hawlo badan. Marka hore waa shaqada caawimada. Haddii aad ogaato in qof uu burburinayo gaarigaaga. Waxaad riixi kartaa batoonkan wakhtigan. Soo dir calaamada digniinta. Haddii aad hesho qof xun, waxaad sidoo kale riixi kartaa batoonkan si aad u wacdo booliiska caawinaad, kaas oo aad si guul leh uga heli karto caawinta dadka kale ee kugu xeeran. Mararka qaarkood waxay badbaadin kartaa nafo waxayna yarayn kartaa dhaawacyada shilalka ah.
2. Dami daaqadaha baabuurka ka dib marka aad damiso
Ka dib markii aan joojiyay baabuurka oo aan damiyay mishiinka, waxaan ogaaday in daaqadaha la ilaaway inay xiraan. Darawallo badan ayaa kaliya yaqaan inay dib u shidaan oo ay xidhaan daaqadaha. Dhab ahaantii, moodooyin badan ayaa xidhi kara daaqadaha iyagoo riixaya oo haysta badhanka dhow ee furaha kontoroolka fogaanta! Dabcan, haddii gaarigaagu uusan lahayn shaqadan, waxaad ku rakibi kartaa wiish si toos ah, kaas oo sidoo kale lagu xaqiijin karo kontoroolka fog ee furaha baabuurka.
3. Gaadhi ka raadi meesha la dhigto
Soo hel shaqada baabuurka Haddii gaadhigaagu ku jiro goobta baabuurta la dhigto oo aanad heli karin meesha baabuurta la dhigto in muddo ah, waxaad riixi kartaa batoonkan hoonka u eg ama badhanka qufulka si aad si cad u maqasho codka baabuurka. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad si degdeg ah u hesho baabuurka.
4. Si toos ah u fur jirridda
Waxa jira badhan lagu furayo jirridda furaha fog ee baabuurka. Riix badhanka furka jirridda (baabuurta qaar, laba-guji), jirku si toos ah ayuu u soo baxayaa! Haddii ay dhacdo in aad gacanta ku haysato shandad weyn ama yar, kaliya si fudud u riix furaha baabuurka oo jirku wuu furmi doonaa, taas oo aad u habboon! Waxaa kaloo jirta xaalad gaar ah. Ha ka baqin 10,000, laakiin haddii ay dhacdo, haddii aad la kulanto baabuur biyaha ku dhacaya, shil baabuur, oo albaabka la furi karin, waxaad riixi kartaa batoonka si aad u furto jirridda si aad uga baxsato.
5. Fur daaqadda meel fog
Shaqadani waxay si gaar ah waxtar u leedahay xagaaga. Waxay ku baabi'in kartaa kulaylka baabuurka cadceedda kulul ka hor inta uusan fuulin gaariga! Kaalay tijaabi furaha gaadhigaaga, taabo oo hayso badhanka furaha dhawr ilbiriqsi, dhammaan 4-da daaqadood miyay furmi doonaan?
6. Kaliya fur albaabka cabbitaanka
Baabuurta qaar, waxaad ka furi kartaa albaabka taksiyada adigoo riixaya furaha kontoroolka fog si aad u furto albaabka; laba jeer oo la cadaadiyo waxay furi doontaa dhammaan 4 albaab. Gaar ahaan, haddii gaarigaagu leeyahay shaqadan oo kale, waxaad la tashan kartaa dukaanka 4S; haddii ay sidaas tahay, aad goobaha dejinta oo wac shaqada.
Ma jiraan warar